पोखराको वडा नं. १७ को स्वास्थ्य र खानेपानीमा जोड दिने गठबन्धनका उम्मेदवारको भनाई — donnews.com
पोखराको वडा नं. १७ को स्वास्थ्य र खानेपानीमा जोड दिने गठबन्धनका उम्मेदवारको भनाई
पोखरा, २५ वैशाख । पोखरा महानगरपालिका–१७ मा कांग्रेसबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार देवराज आर्चायले स्वास्थ्य र खानेपानीमा जोड दिएका छन् । आज मतदातासँग बोल्दै आचार्यले पोखरा १७ पर्यटकीय गन्तव्य भए पनि खानेपानी र स्वास्थ्यमा अझै पनि उस्तै समस्या रहेकाले आफू निर्वाचित भएपछि यस्ता समस्याबारे उजागर गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
पर्यटकीय हव पनि भएकाले पोखरामा पर्यटकको क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि उनले स्थानीय जनतासँगै बसेरै योजना बनाउने योजना रहेको बताएका छन् । एकीकृत समाजवादी र काँग्रेस गठबन्धनबाट अध्यक्ष उम्मेदवार बनेका उनले उम्मेदवार बन्दा पार्टीको तर्फबाट भए पनि निवार्चित भएपछि सवैको साझा अध्यक्ष बनेर काम गर्ने बताएका थिए ।
उनले १७ नम्बर वडामा अझै पनि पिछडिएको बस्ती रहेकाले उनीहरूको दैनिकी सुधारको पक्षमा आफु सधै साथमा रहने बताएका थिए । जनताका साना साना समस्या स्थानीय तहबाटै सम्बोधन गर्न आफू माथिल्लो नेतृत्वसँग लडिरहने उनले मतदातासँग वाचा गरेका छन् ।
यसैगरी, वडा सदस्य पदका उम्मेदवार रन्जिता सुवेदी, गोविन्द बराल, विक्रम भण्डारी र शोभा विकले आफुहरू मतदाताकोमा पुग्दा निकै उत्साह मिलेको बताए । उनीहरूले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । यस्तै, स्थानीयले फुस्रेखोलास्थित मोटरेबलपुल बनाउन पनि गठबन्धनका उम्मेदवारसँग माग राखेका थिए ।